Yaa Faa’iido Ku Qaba Xiriirka Dowladaha Somalia iyo Kenya? – Bandhiga
Yaa Faa’iido Ku Qaba Xiriirka Dowladaha Somalia iyo Kenya?
Waxaa billoow ah khilaaf curdan oo soo kala dhex galay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, sidaas oo ay tahay haddana waxaa soo ifbaxaya weydiiyo ku geedaaman waxa ka dhalan kara xiriirka labada dhinac haddii uu xumaado.
Xiriirka xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi ayaa wanaagsanaa ka hor shirkii shidaalka ee ku soo idlaaday magaalada London.
Marka laga soo tago, xiriirka siyaasadeed, kan diblumaasiyaadeed iyo kan amni ee labada dhinac waxaa jira waxyaabo kale oo aad muhiim u ah sida dhaqaalaha.
Suuqa ugu weyn geeska Afrika wuxuu ku yaallaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaana leh milkiyaddiisa ganacsato Soomaaliyeed.
Soomaali badan baa deggan dalka Kenya kuwaasoo ay kamid yihiin ganacsato aan la tira koobi karin oo dhaqaale badan dalkaasi kaga shaqeysta.
Waxaa intaasi dheer in Islii iyo meelo kale oo Nairobi ka baxsan ay Soomaalida ku leeyihiin hanti ay kamid yihiin guryo waa weyn.
Kenya waxay dalkani Soomaaliya u soo dhoofisaa maalin kasta “Khaad” kaas oo la sheego in lacag dhan “Laba Malyan” oo dollarka Maraykanka ah ay uga soo xarooto.
Su’aashu waxay noqonaysaa, “Yaa Faa’iido Ku Qaba Xiriirka Labada Dhinac Oo Wanaagsanaada?”
Qaar kamid ah ganacsatada ku nool Kenya oo aan la hadalnay ayaa inoogu xog warramay in wax faa’iido ah oo sidaas u badan aynaan ku heysan halkaa islamarkaana canshuurta laga qaado ay u dheer tahay mararka qaar caqabado ay la kulmaan inta ay ku guda jiraan howlahooda shaqo.
Dad xog ogaal ah oo ku sugan Kenya oo diiday in magacooda aan adeegsanno sababo la xiriira xag amni ayaa tilmaamay in Soomaalida ku nool dalkaasi marka la eego ay faa’iido dhaqaale oo aan xad lahayn ay ku qabto dowladda Kenya.
Khubarro darsay cilmiga dhaqaalaha ayaa dareensan in dowladda Kenya, ay khasaare ballaaran kala kulmi karto haddii xaaladda ay sidaan ku sii socoto, tusaale in khilaafka aan la daba qaban.